Tag: ezumike | Martech Zone
Tag: izu ike
Monday, March 4, 2013 Tọzdee, Machị 7, 2013 Douglas Karr
Odi ka mgbe obula m zutere ezigbo enyi, anuru m banyere ngwa oru ohuru nke mere ka ndu di nfe. Mụ na David Grigsby na-abyụ kọfị, ọ bụ nnukwu anụ .NET na-arụ ọrụ maka DocuSign. Mụ na David na-ekwurịta SOAP (Simple Object Access Protocol) na REST APIs (nke ahụ bụ etu anyị si agbagharị). A na m enwe mmasị na REST API n'ihi na ọ dị mfe iji anya nke uche hụ ha ma mepụta ụyọkọ n'otu oge yana - ma belata
Ekwenyesiri m ike na onye ọ bụla nwere ụdị ndị ahịa a. Enweela ngọzi na afọ iri gara aga na enwere m ndị ahịa nwere ezigbo obi ụtọ iso m rụọ ọrụ. Ahụla m otú ụfọdụ ụlọ ọrụ si emeso ndị ahịa ha ihe, m kpọrọ ya asị. Ana m achọ mgbe niile na ọkwa dị elu nke ọrụ. Emeela m nkwa karịa ma nyefee ya. Ma, geesh… na onye ahịa… ma ọ bụrụ na m nwere ike dee ha akwụkwọ ozi… Ezigbo Ndị Ahịa Mkparita, Laghachi mgbe ị họọrọ anyị